Posts – Mood for Movies
ဇာတ်ကားနာမည်ကို All you need is kill မှ Edge of Tomorrow အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းတွေ.. ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ အပြာင်းအလဲတွေ... နောက်ဆုံး minutes တွေမှ casting အသစ်တွေထပ်လုပ်လို့ပြန်ရိုက်ခဲ့ရတဲ့ အခန်းတွေ ကြောင့် ဒီကားကိုသာ Director Doug Liman သာမရိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော် စိတ်ပူနေမိမှာ အမှန်ပဲလို့ ကျွန်တော် လွန်ခဲ့သော် 1 လကျော်ကျော်လောက်က ဒီကားလေးကို Preview ရေးတုန်းကပြောဖူးခဲ့ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီကားကို စိတ်ပူပြီးသွားကြည့်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဇာတ်ကားအပြီးမှာတော့ ကျွန်တော်စိတ်ပူမှု တွေဟာ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရပါတေ
(Spoilers Alert*) ဒီဇာတ်ကားအကြောင်း ကျွန်တော်ရေးချင်ခဲ့ပေမဲ့ ရေးဖို့စိတ်ကူးမရှိခဲ့ဘူး။ ရေးချင်ခဲ့မိတဲ့အကြောင်းအရင်းက ကျွန်တော်ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်ခဲ့မိတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လကျော်ခန့်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးသည့်တိုင် ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အစဉ်ကို ယနေ့တိုင် လိုက်ဒုက္ခပေးကာ နှောက်ယှက်နေဆဲမို့ဖြစ်ပြီး ရေးဖို့စိတ်ကူးမရှိခဲ့ခြင်းကတော့ အလွန်တရာကောင်းမွန်လှတဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို ကျွန်တော့်ရဲ့ညံ့ဖျင်းတဲ့ အရေးအသားတွေကြောင့် မပျက်စီးစေချင်တဲ့ စိတ်တွေရယ်ကြောင့်ပါ။ ဒါဆို အခုမှဘာလို့လာထရေးရသလဲဆိုတာ မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာပြီ။ အမေးရှိရ
ပထမဆုံး ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ Christopher Nolan ရဲ့ဇာတ်ကားသစ် Interstellar ဟာ Perfect ဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရှင်လောကမှာ ကွယ်ပျောက်လုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ Cinematic Experience ဆိုတဲ့ အရာကို ပြန်လည်အသက်သွင်းပေးထားပြီး ရုပ်ရှင်လောကအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားပါပဲ။ လူသားတွေသည် ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ စတင် မွေးဖွားရှင်သန်ခဲ့ကြသည်။ သို့ပေမဲ့ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ သေဆုံးသွားကြဖို့မှ မဟုတ်တာပဲ။ မဝေးတဲ့ အနာဂတ်ခေတ်တစ်ခေတ်မှာ လူသားတွေရှင်သန်နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးသည် ရာသီဥတုပြောင
Massive Spoilers* ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက အလှမ်းကျယ်ဝန်းလှတဲ့ စကြာဝဋာထုကြီးရဲ့တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာ ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ မကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုဆိုတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပာယ် နှစ်ခုတို့ရဲ့ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေပေ့ါ။ . ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကြီးတွေကို ကြည့်ရှုရမဲ့အစား သေးငယ်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့နာမည်မကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို တင်ပြထားခြင်းဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းရယ် Classic Star Wars ရဲ့မူလနောက်ခံတွေကို ပြန်လည် အသက်ဝင်ခံစားခြင်းတွေရယ် ကျွန်တော်တို့တွေ လုံးဝမကြားဖူးသေးတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကိ
(Major Spoilers* - review မဟုတ်ပါ။) မဖိတ်ခေါ်ပဲ သူတို့ရောက်လာကြပြီ။ သူတို့ခရီးစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။ ဒါတွေဟာ ကမ္ဘာမြေမြင်ပေါ်က လူသားတွေအတွက်တော့ အသိချင်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုပဲ။ ဟုတ်တယ်လေ။ တစ်ခြားကမ္ဘာတစ်ခုကလို့ယူဆလို့ရတဲ့ ယာဉ်ပျံ 12 စင်းဟာ ကမ္ဘာမြေရဲ့သီးခြားနေရာတစ်ချို့ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရောက်ရှိလာကြတယ်။ ဒါဟာသမာရိုးကျဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှ မဟုတ်ပဲ။ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ တစ်ခြားကမ္ဘာတွေမှာ သက်ရှိတွေ ရှိလိုရှိငြားဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့တစ်ခြားကမ္ဘာမှသက်ရှိများကို ရှာဖွေနေခဲ့သည်မှာ ကြာမြင့်ခဲ့ပေပြီ။
မနှစ်က La La Land ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် ဇာတ်ကားတစ်ကား ဒီနှစ်ထွက်ခဲ့တယ်။ နာမည်ကတော့ The Disaster Artist ။ . လူတိုင်းနီးပါးကတော့ အနုပညာဓာတ်ခံလေးတွေ ကိုယ်စီရှိတတ်ကြတာချည်းပဲလေ။ ဒါကြောင့်လည်း စာဖတ်တဲ့သူတို့၊ တောင်ခြစ် မြောက်ခြစ် လျှောက်ခြစ်နေတဲ့သူတို့၊ အားတိုင်း သီချင်းနားထောင်တတ်တဲ့သူတို့၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့သူတို့ နဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်နေရတာပဲ မဟုတ်လား။ ခင်ဗျားလည်း ထိုအထဲက တစ်ယောက်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က အနုပညာလေးဓာတ်ခံရှိတယ်ဆိုပြီး အနုပညာတစ်ခု ကောက်ထလုပ်လိုက်မယ်တဲ့။ ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ထင်သလဲ။ . Tom